-Dhacdo Shiinaha T310 wax soo saarka iyo Warshada |Roman
Inta jeer: 2.4GHz
Waqtiga Muusiga: 5.9H
Waqtiga hadalka: 3.2H
Waqtiga heeganka: 69H
Battery-ga dhegaha: 45mAh*2
Midabka: Madow/ Cadaan
Earbuds-ka Wireless-ka ah ee Bluetooth 5.2 Dhagaha-dhegaha, ENC Buuq joojinta Wicitaannada cad
ENC TWS faraha faraha oo madadaalo leh.
Muusiga iyo madadaalada ee faraha
Bluetooth V5.2 gudbinta aad u deggan.
Chips tayo leh ayaa dammaanad qaadaya wax qabad xoogan: Nidaam bluetooth heer sare ah ka dib boqollaal tijaabo oo adag oo leh gudbinta wireless-ka xasiloon oo dejin maqal ah ayaa hubisa wicitaanno tayo sare leh iyo khibrad muusig.
Ku habboonaanta caadiga ah ee raaxada maalinta oo dhan: saldhigga naqshadeynta qaabka qaabka dhegta bini'aadamka ee kor u qaadaya raaxada, taam iyo xasiloonida.
Tignoolajiyada ENC ee wicitaanada cad: ENC si loo helo tayada wacitaanka ee wanaagsan.
Qurux badan, yar oo raaxo leh in la xidho: dhegaha dhegaha ee qaabka bean yar oo jilicsan waa sida 3g.
Xakamaynta taabo&Isku xidhka degdega ah: Kontoroolka taabashada fudud waxay ku siinaysaa khibrad raaxo badan oo ku haboon si aad uga jawaabto telefoonada, bedesho heesaha oo aad u dhaqaajiso caawiye codka adiga oo aan si joogto ah u shaqaynin qalabkaaga moobilka, kaliya si fudud u xakamee adiga oo si fudud ku taabo dhegaha dhegaha. Naqshad, si fudud uga soo saar dhegaha-dhegaha, waxay si toos ah ugu xidhmaysaa aaladaha lammaanaha isla markiiba.
Jirka yar & awoodda batari weyn: ilaa 5.5 saacadood oo wakhtiga dhegeysiga hal lacag in ka badan 17 saacadood oo nolosha batteriga ah oo leh kiis dallacaad waqti ka dheer safarka duulista ee adduunka oo dhan.
Ciyaar/ hakad: taabo taleefoonka dhegaha midig laba jeer.
Jawaab/daldal: taabo laba jeer
Heestii hore: sameecado dheer oo taabasho ah oo loogu talagalay 2s
Heesta xigta: sameecado dheer oo taabasho ah oo loogu talagalay 2s
Si yar taabo si aad u wacdo caawiye cod
Xiga: Xakamaynta Dhagaha-dhegaha-dhegaha-yar ee Bluetooth-ka, Taleefoonnada-dhegaha-gudaha
Qalabka dhegaha ee Bluetooth 5.0, Taleefannada Dhagaha ee Gudaha, Budhadhka dhegaha ee buuqa baabi'inaya, Dheecaanka Bluetooth oo leh Mic, Taleefoonnada dhegaha ee Bluetooth-ka ee bilaa-la'aanta ah, Bluetooth Mono Headset,